Wordpress ဆိုတာ ဘာလဲ?? - Myanmar End User
By Myanmar End User September 15, 2017 1091 views
WordPress ဟာ အခမဲ့ ဖြစ်ပြီး Open source ဖြစ်ပြီး PHP နဲ့ MySQL အပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ Content Management System (CMS) တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CMS ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘလောဂ်တစ်ခု၊ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကမ္ဘာပေါ်က အောင်မြင်နေတဲ့ ဝဘ်ဆိုက် ၁၀ သန်းရဲ့ ၂၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ WordPress ကို အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ WordPress ကို ၂၇ ရက်နေ့ မေလ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ Matt Mullenweg နဲ့ Mike Little တို့ နှစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
WordPress ကို ဘယ်သူတွေ သုံးလဲ??
နာမည်ကြီး နည်းပညာဝဘ်ဆိုက် တော်တော်များများဟာ WordPress ကိုပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။ WordPress နဲ့ Run နေတဲ့ နာမည်ကြီး Website တွေကို အောက်ပါ Link မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
WordPress နဲ့ E-commerce ဝဘ်ဆိုက်တွေအပြင် Social Network, Forum တို့ကိုလည်း WordPress plugin တွေအသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။ WordPress မှာ Professional ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ Powerful ဖြစ်တဲ့ Plugin တွေ မြောက်များစွာ အဆင်သင့်ရှိပြီး ဖြစ်တာကြောင့် Professional ဝဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်လိုသူတိုင်း WordPress ဟာ ရွေးချယ်စရာပါပဲ။
WordPress ကို ဘာလို့ သုံးကြတာလဲ??
WordPress ဟာ အခြားသော CMS တွေထက် ပိုပြီးတော့ လုံခြုံပါတယ်။ အခြားသော CMS တွေထက် Community ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Powerful ဖြစ်တဲ့ Plugin ပိုများပါတယ်။ WordPress ကို လုံခြုံရေးမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ WordPress မှာ အားနည်းချက်ရှိနေရင်တောင် သူ့ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Plugin တွေ WordPress မှာ ရှိပါတယ်။ WordPress လုံခြုံရေး မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာဟာ များပြားပြီး Update မဖြစ်တဲ့ Plugin တွေကြောင့်ပါ။ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ Plugin တွေကို အသုံးပြုထားလို့ WordPress ဆိုက်တွေက ပိုပေါက်တယ်လို့ ထင်ရတာပါ။ နောက်တစ်ခုက WordPress ကို အခြားသော CMS တွေထက် ပိုအသုံးများတဲ့အတွက် ဝဘ်ဆိုက်အရေအတွက်အားဖြင့်လည်း ပိုများတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးမကောင်းဘူးလို့ ထင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာတိုင်းမှာတော့ အားနည်းချက်ရှိတာပါပဲ။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုပ်ပြီး ပစ်ထားလို့မရပါဘူး။ လုံခြုံရေးအရ ပေးတဲ့ Update တွေကို အမြဲပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
WordPress က အသုံးပြုရတာလွယ်သလား??
သာမန် Blog, Website တစ်ခုအတွက် WordPress က အသုံးပြုရတာ အရမ်းကိုလွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ WordPress ရဲ့ Text Editor ကိုလည်း အရမ်းကိုကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ သာမန်အသုံးပြုမယ့် သူတွေအတွက်ဆိုရင် WordPress.com ကနေ Official ထုတ်ပေးထားတဲ့ Jetpack plugin တစ်ခုတည်းနဲ့ အဆင်ပြေပြေ Run နိုင်ပါတယ်။
Professional ဝဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝဘ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာရှိဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်နဲ့ တည်ဆောက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲ မှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဝဘ်နည်းပညာရဲ့ နက်နဲမှုတွေကို နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်နဲ့မှ ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး အစဉ်တစိုက် ထိန်းကြောင်းနိုင်မှာ မို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
WordPress နဲ့ ဘယ်လိုဝဘ်ဆိုက်မျိုးတွေ တည်ဆောက်နိုင်မလဲ??
WordPress နဲ့ မည်သည့်ပုံစံ ဝဘ်ဆိုက်မျိုးမဆို တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက Content Management System ဖြစ်ပြီး Customize ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်းအတွက် Themes ကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီး ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အခြား မိမိစိတ်ကြိုက် Feature တွေ အသုံးပြုဖို့အတွက် Plugin တည်ဆောက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် WordPress နဲ့ တကိုယ်ရေ ဘလော့ဂ်၊ ဝဘ်ဆိုက်၊ သတင်းမီဒီယာ ဝဘ်ဆိုက်၊ အွန်လိုင်းစတိုး၊ ဖိုရမ်၊ လူမှုကွန်ယက်၊ စသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် WordPress မှာ Multisite လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် Domain တစ်ခုအောက်တည်းမှာ WordPress တစ်ခုတည်းနဲ့ ဝဘ်ဆိုက်ပွားတွေ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – ဝဘ်ပေါ်တယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာဝဘ်ဆိုက်၊ သတင်းဝဘ်ဆိုက်၊ ကျန်းမာရေးဝဘ်ဆိုက်၊ အွန်လိုင်းစတိုး စသည်တို့ကို Domain တစ်ခုအောက်တည်းမှာ Subdomain နဲ့ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်လိုပါက သို့မဟုတ် ဒီ Hosting တစ်ခုတည်းမှာပဲ WordPress နဲ့ ဝဘ်ဆိုက်တွေ တည်ဆောက်လိုတဲ့အခါ Multisite နဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာခေတ်မှာ ကုပ္မဏီ၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်း နဲ့ ကျော်ကြားသူတွေအနေနဲ့ ပရိတ်သတ်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့၊ သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ ဝဘ်ဆိုက်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့ ဝဘ်ဆိုက်က ကိုယ့်ရဲ့ သတင်းဌာနပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook မှာ အွန်လိုင်းစတိုး လုပ်နေသူများအနေနဲ့လည်း ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ပြီး Facebook နဲ့ ချိတ်ဆက်ရောင်းချင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စီးပွားရေးကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဝယ်သူတွေကိုလည်း ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar End User မှ ဝဘ်ဆိုက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးလျက်ရှိပါကြောင်း ယခုဆောင်းပါးနဲ့ သတိပေး ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ဝဘ်နည်းပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဆက်လက်ရေးသား ဖော်ပြသွားဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Myanmar End User ရဲ့ Facebook page ကို Like နဲ့ See first လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
WordPress ဟာ အခမဲ့ ဖွဈပွီး Open source ဖွဈပွီး PHP နဲ့ MySQL အပေါျမှာ အခွခေံတဲ့ Content Management System (CMS) တဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ CMS ဖွဈတဲ့အတှကျ ဘလောဂျတဈခု၊ ဝဘျဆိုကျတဈခုကို အခြိနျတိုအတှငျးမှာ တညျဆောကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၇ ဖဖေောျဝါရီလအထိ ကမ်ဘာပေါျက အောငျမွငျနတေဲ့ ဝဘျဆိုကျ ၁၀ သနျးရဲ့ ၂၇.၅ ရာခိုငျနှုနျးဟာ WordPress ကို အသုံးပွုပွီး တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ WordPress ကို ၂၇ ရကျနေ့ မလေ ၂၀ဝ၃ ခုနှဈမှာ Matt Mullenweg နဲ့ Mike Little တို့ နှဈဦးက ထုတျဖောျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
WordPress ကို ဘယျသူတှေ သုံးလဲ??
နာမညျကွီး နညျးပညာဝဘျဆိုကျ တောျတောျမြားမြားဟာ WordPress ကိုပဲ အသုံးပွုကွပါတယျ။ WordPress နဲ့ Run နတေဲ့ နာမညျကွီး Website တှကေို အောကျပါ Link မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
WordPress နဲ့ E-commerce ဝဘျဆိုကျတှအေပွငျ Social Network, Forum တို့ကိုလညျး WordPress plugin တှအေသုံးပွုပွီး တညျဆောကျလို့ရပါတယျ။ WordPress မှာ Professional ဝဘျဆိုကျတဈခု ဖနျတီးဖို့ Powerful ဖွဈတဲ့ Plugin တှေ မွောကျမြားစှာ အဆငျသငျ့ရှိပွီး ဖွဈတာကွောငျ့ Professional ဝဘျဆိုကျတညျဆောကျလိုသူတိုငျး WordPress ဟာ ရှေးခယြျစရာပါပဲ။
WordPress ကို ဘာလို့ သုံးကွတာလဲ??
WordPress ဟာ အခွားသော CMS တှထေကျ ပိုပွီးတော့ လုံခွုံပါတယျ။ အခွားသော CMS တှထေကျ Community ကယြျပွနျ့ပါတယျ။ Powerful ဖွဈတဲ့ Plugin ပိုမြားပါတယျ။ WordPress ကို လုံခွုံရေးမကောငျးဘူးလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါဟာ တကယျတော့ မဟုတျပါဘူး။ WordPress မှာ အားနညျးခကြျရှိနရေငျတောငျ သူ့ကို ကာကှယျပေးတဲ့ Plugin တှေ WordPress မှာ ရှိပါတယျ။ WordPress လုံခွုံရေး မကောငျးဘူးလို့ ပွောတာဟာ မြားပွားပွီး Update မဖွဈတဲ့ Plugin တှကွေောငျ့ပါ။ လုံခွုံမှုမရှိတဲ့ Plugin တှကေို အသုံးပွုထားလို့ WordPress ဆိုကျတှကေ ပိုပေါကျတယျလို့ ထငျရတာပါ။ နောကျတဈခုက WordPress ကို အခွားသော CMS တှထေကျ ပိုအသုံးမြားတဲ့အတှကျ ဝဘျဆိုကျအရအေတှကျအားဖွငျ့လညျး ပိုမြားတဲ့အတှကျ လုံခွုံရေးမကောငျးဘူးလို့ ထငျရတာ ဖွဈပါတယျ။ နညျးပညာတိုငျးမှာတော့ အားနညျးခကြျရှိတာပါပဲ။ ဝဘျဆိုကျတဈခုလုပျပွီး ပဈထားလို့မရပါဘူး။ လုံခွုံရေးအရ ပေးတဲ့ Update တှကေို အမွဲပွုလုပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
WordPress က အသုံးပွုရတာလှယျသလား??
သာမနျ Blog, Website တဈခုအတှကျ WordPress က အသုံးပွုရတာ အရမျးကိုလှယျကူအောငျ ဆောငျရှကျပေးထားပါတယျ။ WordPress ရဲ့ Text Editor ကိုလညျး အရမျးကိုကောငျးမှနျအောငျ ဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ သာမနျအသုံးပွုမယျ့ သူတှအေတှကျဆိုရငျ WordPress.com ကနေ Official ထုတျပေးထားတဲ့ Jetpack plugin တဈခုတညျးနဲ့ အဆငျပွပွေေ Run နိုငျပါတယျ။
Professional ဝဘျဆိုကျတညျဆောကျမယျဆိုရငျတော့ ဝဘျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အသိပညာရှိဖို့ လိုအပျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ပညာရှငျနဲ့ တညျဆောကျပွီး စီမံခနျ့ခှဲ မှ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဝဘျနညျးပညာရဲ့ နကျနဲမှုတှကေို နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ပညာရှငျနဲ့မှ ဖွရှေငျးနိုငျပွီး အစဉျတစိုကျ ထိနျးကွောငျးနိုငျမှာ မို့ပဲဖွဈပါတယျ။
WordPress နဲ့ ဘယျလိုဝဘျဆိုကျမြိုးတှေ တညျဆောကျနိုငျမလဲ??
WordPress နဲ့ မညျသညျ့ပုံစံ ဝဘျဆိုကျမြိုးမဆို တညျဆောကျလို့ရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူက Content Management System ဖွဈပွီး Customize ရတဲ့အတှကျကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝဘျဆိုကျ ဒီဇိုငျးအတှကျ Themes ကို စိတျကွိုကျဖနျတီး ထညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။ အခွား မိမိစိတျကွိုကျ Feature တှေ အသုံးပွုဖို့အတှကျ Plugin တညျဆောကျပွီး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ WordPress နဲ့ တကိုယျရေ ဘလော့ဂျ၊ ဝဘျဆိုကျ၊ သတငျးမီဒီယာ ဝဘျဆိုကျ၊ အှနျလိုငျးစတိုး၊ ဖိုရမျ၊ လူမှုကှနျယကျ၊ စသဖွငျ့ ပုံစံမြိုးစုံ ဖနျတီးတညျဆောကျနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ WordPress မှာ Multisite လုပျလို့ရတဲ့အတှကျ Domain တဈခုအောကျတညျးမှာ WordPress တဈခုတညျးနဲ့ ဝဘျဆိုကျပှားတှေ လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ – ဝဘျပေါျတယျပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။ နညျးပညာဝဘျဆိုကျ၊ သတငျးဝဘျဆိုကျ၊ ကနြျးမာရေးဝဘျဆိုကျ၊ အှနျလိုငျးစတိုး စသညျတို့ကို Domain တဈခုအောကျတညျးမှာ Subdomain နဲ့ ဝဘျဆိုကျတဈခုကို ဒီဇိုငျးတဈမြိုးဖွငျ့ ပွုလုပျလိုပါက သို့မဟုတျ ဒီ Hosting တဈခုတညျးမှာပဲ WordPress နဲ့ ဝဘျဆိုကျတှေ တညျဆောကျလိုတဲ့အခါ Multisite နဲ့ တညျဆောကျနိုငျပါတယျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ သတငျးအခကြျအလကျနဲ့ နညျးပညာခတျေမှာ ကုပ်မဏီ၊ လုပျငနျး၊ အဖှဲ့အစညျး နဲ့ ကြောျကွားသူတှအေနနေဲ့ ပရိတျသတျနဲ့ ထိတှေ့ဆကျဆံဖို့၊ သတငျးထုတျပွနျဖို့ ဝဘျဆိုကျက မရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ကိုယျရဲ့ ဝဘျဆိုကျက ကိုယျ့ရဲ့ သတငျးဌာနပဲ ဖွဈပါတယျ။ Facebook မှာ အှနျလိုငျးစတိုး လုပျနသေူမြားအနနေဲ့လညျး ဝဘျဆိုကျပေါျတငျပွီး Facebook နဲ့ ခြိတျဆကျရောငျးခငြျးဖွငျ့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ စီးပှားရေးကို ဖနျတီးနိုငျမှာ ဖွဈပွီး ဝယျသူတှကေိုလညျး ပိုမိုဆှဲဆောငျနိုငျစမှော ဖွဈပါတယျ။
Myanmar End User မှ ဝဘျဆိုကျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှကေိုပေးလကြျရှိပါကွောငျး ယခုဆောငျးပါးနဲ့ သတိပေး ဖောျပွလိုကျရပါတယျ။ ဝဘျနညျးပညာနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ဆောငျးပါးတှကေို ဆကျလကျရေးသား ဖောျပွသှားဦးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ Myanmar End User ရဲ့ Facebook page ကို Like နဲ့ See first လုပျထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
October 11, 2017 111151 views